ဒရိုင်ဘာမြတ်ထွန်း **** ( စ / ဆုံး ) – Grab Love Story
ဒရိုင်ဘာမြတ်ထွန်း **** ( စ / ဆုံး )
by phyu July 1, 2021
( နရသူ )
ခြံဝင်းကျယ်ကြီးအနောက်ဖက်က ဒရိုင်ဘာအတွက် သီးသန့်ပေးထားသည့် အခန်းကလေးထဲမှာ ကားဒရိုင်ဘာမြတ်ထွန်းတစ်ယောက်တည်း သူ့ဖီလင်နှင့်သူ အရက်ထိုင်သောက်နေသည်။ ဒီနေ့ သူ အလုပ်အားသည်။ အိမ်ကြီးရှင်တွေ တစ်ယောက်မှမရှိကြဘဲ မေမြို့ဖက်ကိုခရီးထွက်သွားတာကြောင့် အိမ်မှာမာလီဘိုးစိန်ရယ် အိမ်ဖော်မအုန်းတို့သားအမိရယ်သာရှိကြသဖြင့် ပင်ကိုယ်ကပင် အသောက်အစား မက်လွန်းသူပီပီ ဇာတိပြပြီး လမ်းထိပ်ကဆိုင်မှာ အရက်နှစ်လုံးသွားဝယ်လာခဲ့ကာ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်ချရင်း ဆက်ရက်မင်းစည်းစိမ်ခံစားနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မြတ်ထွန်းအသက် ၄၀ ကျော်ပြီ။ဒီအိမ်မှာပဲ အိမ်ကြီးရှင်၏ကားဒရိုင်အဖြစ်ကျိုးနွံစွာ အမှုတော်ထမ်းလာခဲ့တာ ကြာပြီ ဖြစ်သည်။ အိမ်ရှင်ဦးကောင်းဇံ ရှိစဉ်ကတည်းကဖြစ်သည်။ ခုတော့ သူလည်း ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက်ခဲ့ရပေပြီ။ သူ့ဇနီးနှင့် သားသမီးများသာကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သားသမီးတွေကလည်း နိုင်ငံခြားသို့ ရောက်သူရောက် တစ်ရပ်တစ်ပါးမှာအခြေချသူချနှင့်မို့ မိသားစုဝင် အနည်းငယ်သာ ဒီအိမ်ကြီးမှာ ကျန်ခဲ့တော့သည်။ ဘယ်အရာမှမမြဲတာ လူ့လောကဓမ္မတာပဲမဟုတ်လား။ သူပြန်ပြောင်းစဉ်းစားရင်း လွမ်းသလိုဆွေးသလို သံဝေဂရချင်သလိုလို ဖြစ်လာရတော့သည်။
မြတ်ထွန်းက လူလွတ် တစ်ယောက်တည်းသမားပင်။ သူအရင်က အိမ်ထောင်ရက်သား တစ်ကြိမ် ကျဖူးခဲ့ပေမယ့် မမြဲခဲ့ပါ။ ခြံခုန်ချင်တဲ့ မယားလုပ်သူကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးအကွဲအပြဲဇာတ်ခင်းခဲ့ပြီး နောက်ထပ် တစ်အိုးတစ်အိမ် ထူထောင်ဖို့ ကိုလည်း လုံးဝစိတ်ကူးထဲ မထည့်တော့ချေ။ယောက်ျားပီပီ ဆာလျှင်ဝယ်စားမည်။ လောကမှာ မယားကောင်းသာရှားသည် မိန်းမအလွန်ပေါလှသည်လို့ပဲ သူခံယူထားခဲ့သည်။
အရက်တစ်လုံးကုန်တော့မြတ်ထွန်းရေချိန်နည်းနည်းကိုက်လာသည်။ ကဇော်သမားထုံးစံ မူးလာတာနှင့်တစ်စုံတစ်ရာကို တမ်းတလာသည်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှ ကာလအတန်ကြာ ငုပ်လျှိုးပုန်းကွယ်နေခဲ့သော အရာတစ်ခုကပြန်လည် အသက်ဝင်နိုးထလာရသလိုပင်။သူ အတော်ကလေးကိုလိုချင်လာသည်။
သူ့မျက်စိထဲမှာ စပေါ်လာသည်က ဤအိမ်မှ ထမင်းချက်မအုန်း၏ထည်ဝါလှသောအိုးကြီးများ ပြီးတော့ သူမ၏သမီးဖြစ်သူ အိမ်ဖော်မကလေးဖွေဖွေး၏ လုံးကစ်တစ်ရစ်သော ခန္ဓာကိုယ် အသားဆိုင် အိအိလုံးလုံးကလေးများ။ ကောင်မလေးက တကယ်တမ်းအားဖြင့် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ရုံမျှသာ ရှိဦးမည်။ မဖြစ်နိုင် ဒီလိုတော့လည်း ဘယ်နည်းနှင့်မျှ မဖြစ်နိုင်ပါချေ။ စောင့်ထိန်းအပ်သည့် လူမှုကျင့်ဝတ်ဆိုတာက ရှိသေးသည်။ သိက္ခာမလှလျှင်တောင်မှ လိပ်ပြာသန့်ဖို့ အရေးကြီးပေသေးသည်။မြတ်ထွန်းလည်း တစ်ချိုးတည်း လှဲအိပ်ချလိုက်ရာက အရက်ကလေး ခပ်ထွေထွေနှင့်မို့ ခေါင်းအုံးနှင့်ခေါင်း ထိရုံမျှနှင့်ပင် တခူးခူးတခေါခေါဟောက်သံများ သူ့ထံမှထွက်ပေါ်လာပြီး အိပ်ပျော်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရလေပြီ။
မနက် ၁၀ နာရီထိုးပြီးချိန်လောက်မှာ ထမင်းချက်မအုန်းတစ်ယောက် သုံးဆင့်ချိုင့်တစ်လုံး လက်မှာဆွဲပြီး မြတ်ထွန်းအခန်းကို ရောက်ရှိလာသည်။
သူတို့တွေက တစ်အိမ်တည်းသား မိသားစုဝင်တွေလိုဖြစ်နေတာမို့ မြတ်ထွန်းနံနက်စာစားဖို့ရောက်မလာတာနှင့် ဘာများ ဖြစ်လို့လဲ ဆိုပြီး သတင်းမေးရင်း သူ့အတွက် ထမင်းချိုင့်ပါ တစ်ပါတည်း ထည့်ယူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“မြတ်ထွန်း ဟဲ့ မြတ်ထွန်း “
အသံပေးရင်း အခန်းထဲလှမ်းဝင်လိုက်ရာက သူမခြေလှမ်းတွေ ရုတ်တရက်တုံ့ဆိုင်းဆိုင်းကြီးဖြစ်လို့ သွားရလေသည်။
မြတ်ထွန်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေသည်။
အရက်ကိုအလွန်အကျွံကြီး ရေချိန်လွန်အောင်သောက်ထားပြီး မိန်းမတစ်ယောက်နှင့်လည်း ရေကုန်ရေခမ်း သုက်ဓာတ်ဖြုန်းတီးကာ ကာမနယ်ကျွံခဲ့မိသည်ဖြစ်၍ သတိလက်လွတ်အိပ်ရင်း ပုဆိုးတခြားလူတခြား ပိုးစိုးပက်စက် ရှုမြင်လို့မကောင်းနိုင်အောင်ဘဲဖြစ်ကာနေသည်။မြတ်ထွန်းလီးကြီးက မအုန်းရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ နီရဲတောင်မတ်ပြီး မိုးပေါ်သို့တည့်တည့်ထောင်ကာနေသည်။ သူတမင်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အိပ်ခန်းထဲမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မောကျနေရာမှ ယခုလို သူ့လီးက မတ်တာင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း အိမ်ထောင်သည် သမီးတစ်ယောက်အမေပီပီ မအုန်းအခြေအနေကို သဘောပေါက်နားလည်လိုက်သည်။
မအုန်းစိတ်ထဲ တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်ကာ မြတ်ထွန်းအနားကို မသိမသာကပ်၍ သူ့နဘေးမှာထိုင်ချလိုက်ရင်း မြတ်ထွန်း၏ပေါင်ကြားထဲမှ လီးကြီးကို အသေအချာပင်ထိုင်ကြည့်နေပါသည်။လီးကနည်းတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ဘဲ လုံးပတ်လက်တစ်ဆုပ်တစ်ကိုင်စာမက အရှည်က ၈ လက်မခန့်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ချက်ချင်းမြင်တာနှင့်ပင် ခန့်မှန်းမိလိုက်သည်။
မြတ်ထွန်း ကားရေဆေး စက်ပြင်လုပ်ရင်း တစ်ခါတစ်ခါ အောက်စလွတ်တာမျိုး လောက်သာ မြင်ဖူးခဲ့ပြီး သူ့လီးကြီးမှန်းသတိထားမိပေမယ့် ဒီလောက်အထိ ကြီးပြီး ရှည်လိမ့်မည်လို့ ယောင်လို့တောင် မထင်မှတ်မိခဲ့တာအမှန်ပဲဖြစ်သည်။
မအုန်းပျိုရွယ်ချိန် ရွာမှာရှိစဉ်ကတည်းက လီးကြီးကြီးကို အလွန်မက်မောဖူးခဲ့သူဖြစ်သည်။ ရွာအနောက်ပိုင်းဗွီဒီယိုရုံမှာပြသည့် အပြာကား အောကားဆိုသည်ကို အဖော်တွေနှင့်ခိုးခိုးကြည့်ခဲ့ပြီး ကပ္ပလီလီးမည်းမည်းကြီးများကိုတွေ့၍ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင် စောက်ပတ်ရွခဲ့ထခဲ့ဖူးပါသည်။
လယ်တဲတစ်ခုမှာ ကာလသားခေါင်း အောင်ကြီးဆိုသူနှင့် ချိန်းတွေ့ရာက စောက်ပတ်ကွဲပြဲသွားအောင် သူမအလိုးခံရကာ အပျိုရည်ပျက်ခဲ့ရပြီး နောက်ထပ် အောင်ကြီးချိန်းတိုင်းလည်း မသွားရမနေနိုင်အောင် သူ့လီးငပဲတုတ်တုတ်ကြီးကို စွဲလန်း တပ်မက်ခဲ့ဖူးပါသည်။
သမီးဖွေးဖွေး၏ဖခင်ဖြစ်သူ ကိုမြမောင်နှင့်ဖူးစာဆုံမိကြရာက မြို့ကို လိုက်ပါလာခဲ့ရပြီး ဝမ်းရေးအတွက် အချိန်ရှိသမျှရုန်းကန်ရင်း အသွေးအသားလိုအင်ကိုဖြည့်တင်းဖို့တောင် အချိန်မရနိုင်တော့ပေ။ မအုန်း ရေထမ်း အကြော်ရောင်း ခေါင်းရွက်ဗျပ်ထိုးဈေးသည်ဘဝနှင့် အလုပ်ကြမ်းတော်တော်များများလည်း လုပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ နောက်ဆုံးခင်ပွန်းဖြစ်သူ အရက်နွံနစ်၍ ဆုံးသွားတော့ သမီးဖွေးဖွေး ငါးနှစ်သမီးလောက်မှာ သမီးလက်ဆွဲ၍ ဤအိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ဇာတ်မြှုပ် နေထိုင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြတ်ထွန်းကို သူမ သဒ္ဓါယိုဖိတ်ခဲ့ပြီးသားပင်။ ဒီအိမ်ကို စရောက်စဉ်ကတည်းကပင် မြတ်ထွန်းကို သူမ ပရောပရီကလေး အမြဲလုပ်ခဲ့သည်။ သူနှင့်အရောတဝင်နေပြီး ရေလာမြောင်းပေးလုပ်ပေမယ့် သမီးကလည်း တစ်ဖက်နှင့်မို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာ မလွန်ကျွံအောင်ထိန်းပြီး နေလာခဲ့ရသည်။
မြတ်ထွန်းက သူမထက် ၅နှစ်လောက်ငယ်သည်။ ဒါပေမယ့်အရွယ်ချင်းမတိမ်းမယိမ်း တစ်တန်းတည်းဖြစ်ကြတာမို့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ သူမစိတ်ဝင်စားမှုက လျော့ကျမသွားသည့်အပြင် အနေနီးသူချင်းမို့လည်းသံယောဇဉ်က ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နေမိပေသည်။
ယခုလို မြတ်ထွန်းလီးကြီးကို သူမမျက်စိရှေ့မှောက်မှာ မျက်ဝါးထင်ထင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လိုက်ရချိန်မှာတော့ သူမစိတ်ကို ဘယ်လိုမှပင် မထိန်းနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပေပြီ။ မအုန်းလက်ကလေးတစ်ဖက်က မြတ်ထွန်း၏ ပေါင်ကြားထဲသို့ လှစ်ကနဲရောက်ရှိသွားပြီး သူ၏ လဒစ်ပြဲလန်နေသောလီးချောင်းတုတ်တုတ်ကြီးကို လက်ဖြင့် အသာဆုပ်ကိုင်ကာ ဖျစ်ကြည့်ညှစ်ကြည့်လိုက်သည်။
လီးဒစ်ထိပ်လုံးမှ သားရေကိုဖြဲလှန်လိုက်ရင်း လက်နှင့် တစ်ချက်နှစ်ချက် ဂွင်းတိုက်သလိုဆောင့်၍ လက်တစ်ဖက်ကလည်း သူမ၏ပေါင်ကြားထဲကို တိုးဝင်သွားကာ ပေါင်ကြားရှိစောက်ပတ်ကို ထမီအပေါ်ကနေပြီး ပွတ်သပ် နှိုက်ဆွပေးနေမိလေသည်။
မြတ်ထွန်းလီးကြီးက တောင်ချင်တိုင်းတောင်ပြီး အကြောအပြိုင်းပြိုင်းထကာ သူမလက်ထဲမှာ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေပါသည်။ မအုန်းလက်နှစ်ဖက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ထားတာတောင်မှ လီးထိပ်ဒစ်ခေါင်းကြီးက ပြူးပြဲ၍ ထွက်ပေါ်နေသေးတာမို့ မအုန်းတစ်ယောက် အသည်းတယားယား ရင်တဖိုဖို ဖြစ်၍လာရတော့သည်။
သူမစောက်ပတ်လည်း စောက်ရည်တွေ အသည်းအသန်လိုက်ကာ ထွက်ကျလာခဲ့သည်။ မအုန်း တင်းခံမထားနိုင်တော့ဘဲ လီးကြီးကို အပေါ်ကနေတက်ဆောင့်ချင်စိတ်ပေါက်လာမိပေသည်။
အတော်ကလေးအရဲစွန့်ပြီး သူမထမီကို ဖင်သားအိအိနှစ်ဖက်စလုံးပေါ်အောင် ခါးအထက်ဆီကို ပင့်လှန်တင်လိုက်ပြီး ပက်လက်ကားယား ဖြစ်နေသော မြတ်ထွန်းအပေါ်ကနေတက်ခွ၍ ထိုင်လိုက်ရာက သူ့လီးထိပ်ဖူးကြီးကို သူမစောက်ပတ်ထဲသို့ ဖိနှစ်ထည့်သွင်းပစ်လိုက်လေသည်။
လီးထိပ်က သူမစောက်ခေါင်း အပေါက်ကလေးထဲသို့ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းနှင့်ပင်တိုးဝင်သွားသည်။ မအုန်း တစ်ချက်နှစ်ချက် ဖိထိုင်ကာ ဆောင့်ချလိုက်သည်။
လီးကြီးကဒစ်မြုပ်ရုံမျှ မကတော့ဘဲ လီးတဝက်လောက်အထိ ဇွပ် ဖွပ် …ကနဲ တိုးဝင်သွားသဖြင့် မအုန်း ဆီးစပ်မှာအောင့်တောင့်တောင့်ကြီးပင် ဖြစ်သွားကာ နှုတ်မှလည်း “အ … အိ ဟင့် …အင့် ” ဟူသော အမေဋိတ်သံကလေး လွင့်စင်ထွက်သွားရလျှက် …
“အင်း အ င်း …ဟင့် ဟင့် “
“အ အင်း ဟင်း ဟင် မ … မအုန်း ??? “
“အို … မြတ် မြတ် ထွန်း ဟင့် ဟင့် “
မထင်မှတ်ဘဲ မြတ်ထွန်း မျက်လုံးများပွင့်၍ လာပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာခွစီးထားသော မအုန်းအဖြစ်ကို မြင်လိုက်ရတာကြောင့် အတော်ကြီးကို အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပြီး …
တဖန် မအုန်း ကိုယ်တိုင်မှာလည်း သူမစောက်ပတ်ထဲမှာ မြတ်ထွန်းလီးကြီးတန်းလန်းနှင့်မို့ ရှက်လည်းရှက် မျက်နှာလည်းပူမိသွားကာ ရုတ်တရက်မြတ်ထွန်းကိုယ်ပေါ်ကို ဖိမှောက်အိပ်ချလိုက်ရာက ခေါင်းပင်မဖော်ဝံ့တော့ဘဲ …
“မြတ် မြတ်ထွန်း …ငါ …ငါ … ဟို … “
ဆိုပြီး ဗလုံးဗထွေး အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့လေသံနှင့် …
မြတ်ထွန်းသဘောပေါက်သွားသည်။ မအုန်းကိုလည်း တော်တော်ကလေး အသနားပိုသွားမိပါသည်။ သူမခမျာ လင်လည်းမရှိရှာတော့တာကြောင့် အလိုးခံဖူးသော မိန်းမသားတစ်ယောက်အနေနှင့် ယောက်ျားလီးကို တစ်ခါတစ်ရံ တောင့်တမိပေလိမ့်မည်။ရင်းနှီးသူတွေလည်းဖြစ် တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် နောကြေအောင်သိသူတွေပီပီ မြတ်ထွန်း နှစ်သိမ့်မှုပေးသည့်အနေနှင့် မအုန်းကိုယ်ကလေးကို ခပ်တင်းတင်းပင်ပွေ့ဖက်ထားလိုက်ပြီး သူမမျက်နှာ ကလေးကိုမော့စေလိုက်ကာ ကြင်ကြင်နာနာ အနမ်းပေးနေမိပါလေသည်။ နှုတ်မှလည်း …
“မအုန်းရယ် ချစ်လိုက်ရတာ အဲဒီလောက်အထိ … ကျွန်တော့်ကို ချစ်ရသလား ဟင် … ပြောစမ်းပါဦး လူကို မသိအောင်တိတ်တိတ်ကလေးလာပြီး ခိုး လိုး တာပေါ့ ဟုတ်လား …ဟင်း ဟင်း ဟင်း “
“အို သွား မသိဘူး ဒီကဖြင့် … ဟင့် ဟင့် ဟင့် “
မအုန်း ရှက်စနိုးနှင့် သူ့ရင်ဘတ်ကို တဘုန်းဘုန်းထုရိုက်ပစ်နေသည်။ မြတ်ထွန်း သူမလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကို ဆွဲဖယ်လိုက်ရင်း သူမရင်သား အိအိကြီးနှစ်ဖက်ကို အကျီင်္ပေါ်ကနေပဲ ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ချေပေးလိုက်ပါသည်။
“အို ဟင့် ဖယ် အကျီင်္ ကြေကုန်ပါ့မယ် “
“ဒါဖြင့် ချွတ်ပေး နို့စို့ချင်လို့ နို့စို့ စို့ပြီး လိုးရတာ သိပ်ဇိမ်ရှိတယ် မအုန်းရဲ့ “
“အံမယ် သူက သိရပြန်ပြီ “
“ကဲပါ ချွတ် ပြီးတော့ ဖင်ကြီးကို လည်း ဒီလိုပဲ ဖိထိုင်မထားနဲ့ဦး ဆောင့်ပေး အပေါ်စီးကနေ အားနဲ့ လှိမ့်လှိမ့်ပြီး လိုးပေး ကြားလား မအုန်း “
“ဟင့် အင်း မလိုးဘူး… သူ့ဟာကြီး ဒီလောက်ကြီးတာ …ကြပ်နေတာပဲ ဟင့် ဟင့် “
မအုန်း အပြတ်ညု နေသည်။ ဘယ်လိုပဲ မူတယ်ပြောပြော သူမအင်္ကျီကြယ်သီးတွေကိုတော့ သူ့အလိုကျ ဖြုတ်ပေးရှာပါသည်။မြတ်ထွန်း နို့အုံအိအိနှစ်လုံးကိုညှစ်နယ်သည်။ နို့ကိုစို့ပေးသည်။နို့သီးခေါင်းကလေးနှစ်ခုအား ဖျစ်ချေကာ ပွတ်လှိမ့် ကစားပေးလိုက်သည်။
မအုန်းကောင်းလာဟန်တူပြီး သူမဖင်ကြီးကို အပေါ်ကနေတအိအိနှင့် စတင်ဖိဆောင့်ချလာပါသည်။ သူမမှာ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း အသားပြည့်ပြည့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် တောင့်တင်းဖွံ့ထွားသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်ကာ ရင်သားပြည့်ဖြိုး၍ တင်ပဆုံထွားထွားကားကား ရမက်ကြွစေသောအလှမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်သည်။
မြတ်ထွန်း သူမ၏ ဖင်သားနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ရင်း ဖျစ်လိုက်နယ်လိုက်နှင့် အသာပင့်ပင့်ပေးလိုက်ကာ မအုန်းကို ဖိလိုက်ကြွလိုက်လုပ်စေရင်း စအိုပေါက်ကလေးထဲကိုလည်း လက်ကလေးထိုး၍ နှိုက်ဆွပေးနေပေသည်။
သူ့လီးကိုလည်းအောက်ကနေကော့ထိုးပေးရင်း မအုန်းအရသာရှိအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဝိုင်းကူ၍ ညှောင့်လိုးပေးနေသည်။
မအုန်းက သူ့လီးတဝက်လောက်သွင်းပြီး ခပ်သွက်သွက်ဖင်ကိုရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ကာ ဆောင့်ထိုင်ချနေခြင်းဖြစ်သည်။
“မမ ကောင်းလား ကျွန်တော့် လီးကို ကြိုက်လား “
“အင်း အင်း ဟင်း ကောင်း ကောင်းတယ် “
ဆိုပြီး သူမက မြတ်ထွန်းမျက်နှာဆီ ခေါင်းကိုငုံ့ကိုင်းလိုက်ကာ လေသံတိုးတိုးကလေးဖြင့်…
“မင်း မမအုန်းကို အထင်မသေး ပါဘူးနော် မောင်မြတ်ထွန်း “
“မသေး ပါဘူး … မမအုန်းရယ် ချစ်တောင်ပိုချစ်လာမိသေးတယ် ကျွန်တော်မမကို … အရင်ကတည်းက ဘယ်လောက် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ… မမသိပါတယ် “
“မင်းပြောရင်လည်းပြောစရာပဲ အထင်သေးရင်လည်း… မတတ်နိုင်ပါဘူး မောင်လေးရယ် မမက … အရင်မှားမိတဲ့ သူကိုး “
“ကဲပါ မမရယ် ဒါဖြင့် မမအောက်ကနေလိုက် … ကျွန်တော်အပေါ်ကလိုးမယ် ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား “
“အင်း ဖြစ်တယ် မင်း စိတ်ကြိုက်မမ ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ် မောင်လေးရယ် “
မြတ်ထွန်းသူမကို ပက်လက်လှန်စေလိုက်သည်။ သူမအင်္ကျီကိုရော ထမီကိုပါဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ပေါက်နှစ်ဖက်ကို ဘယ်တစ်ဖက် ညာတစ်ဖက် ဒူးထောင်ပေါင်ကားလုပ်ပေးလိုက်ရာက သူမပေါင်ကြားရှိ စောက်ပတ်ဖောင်းကားကားကြီးကို သူ့မျက်နှာအပ်ကာ ကုန်းနမ်းပစ်လိုက်ပါသည်။
စောက်ပတ်ကိုလျှာနှင့် ပယ်ပယ်နယ်နယ်ပင် ယက်ပစ်လိုက်သည်။သူမစောက်ပတ်မှာ စောစောကတည်းကပင် အရည်တရွှဲရွှဲဖြစ်နေလေရာ မြတ်ထွန်း ဘာဂျာကိုင်ပေးလိုက်တော့ အခြေအနေပိုဆိုးသွားပြီး မခံမရပ်နိုင်စွာဖြင့် မအုန်းတစ်ယောက် ဣနြေ္ဒပျက်သည်အထိ ဖြစ်လာခဲ့ရပေသည်။
“အို့ အ အရှီး အလာ့ လား မောင် မြတ် အ အ ဟီးဟီး … ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ အီး အိ အိ မမ မနေနိုင်ဘူး လိုးတော့ကွာ လိုးပါတော့ မောင်လေး ရဲ့ အား အား တော် တော်ပြီ ဟင်း ဟင်း “
ဆိုပြီး ကော့ပျံထွန့်လူးရင်း မြတ်ထွန်းခေါင်းကို အတင်းပင်ဆွဲဖယ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။မြတ်ထွန်းလည်း သူမကို မနှိပ်စက်ချင်တော့ပြီ။ သူမလိုအပ်နေပြီဖြစ်သောလီးအရသာကို အပြည့်အဝ ပေးတော့မည် ဟူသော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သူမအပေါ်တက်ခွလိုက်ကာ ပေါင်နှစ်ဖက်အကြားမှာ ဝင်ရောက်နေရာယူ၍ သူ့လီးဒစ်ကြီးကို သူမစောက်ပတ်ထဲသို့ တစ်ချက်တည်း အရင်းထိရောက်အောင်ပဲ ဗြိ ဇွတ် ကနဲ နေအောင် တစ်ဆုံးဆောင့်လိုးချ လိုက်ပေတော့သည်။
“အားးးး မောင်လေးးးးးး … ရယ် …… …… “
မအုန်းမျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့ပြီး သူ့ခါးကို လက်မလွှတ်စတမ်းပင် တင်းတင်းကြီးဖက်တွယ်ထားလိုက်ပါတော့သည်။ မြတ်ထွန်းလည်း သူ့လီးကို ပြန်ဆွဲနှုတ်၍ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဆောင့်ချပြန်သည်။မအုန်း စောက်ပတ်မှာ သူ့လီးအဝင်နက်မှုကြောင့် ပိုမိုပြဲအာထွက်သွားရပြီး သူမစောက်ခေါင်းထဲမှာလည်း မြတ်ထွန်းလီးက တစ်တစ်ဆို့ဆို့ သပ်လျှိုထားသလိုကြီး ဖြစ်ကာနေပေတော့သည်။
“မင်း မင်း သိပ် ရက်စက်တယ် အီးအီး ဟီး “
“မရက်စက်ပါဘူး ကျွန်တော် မမအုန်းကို ခုမှမဟုတ်ဘူး အရင်ကတည်းကလိုးချင်နေတာ ဟောဒီ စောက်ပတ်ကြီးကို အပြတ်လိုးခွဲပစ်မယ် ပြီးရင်မမအုန်းကို ယူမယ် တစ်သက်လုံးလိုးမယ် ဟဲဟဲ “
“သွား သူ့ပါးစပ်ပုပ်ကြီးနဲ့ ဘယ်သူယူမယ် ပြောလို့လဲ “
“လိုးပြီးရင် ယူကြရ မှာပေါ့ … မမလည်း… ကျွန်တော့်လီးကြီးကိုစွဲသလို ကျွန်တော်လည်း … ဟောဒီ မမအုန်း စောက်ပတ်ကြီးကို စွဲသွားမှာပဲ … ယူကြတာမကောင်း ဘူးလား “
“ဟင်း မင်း သဘော မင်းသဘောအတိုင်းပဲ… နော် မမအုန်းကတော့ ယူချင်ယူ မယူချင်နေ… မင်းလိုးတာခံချင်တာပဲ သိတော့တယ်… ကဲ ကဲ ဆောင့် ဆောင့်ပါ အချိန်ဆွဲမနေနဲ့ ကိုယ်တော်ချောရဲ့ “
“လီးတစ်ဆုံးဆောင့်မှာ နော် မမအုန်း “
“ဆောင့် လူကို အသေလိုးချင်လည်းလိုး တစ်ခါတည်း လိုးသတ်လိုက် အေးရော ဟွန်းးး “
မအုန်း ခပ်ရွဲ့ရွဲ့ကလေးပြောလိုက်ရင်း မြတ်ထွန်းကလည်း သူမပေါင်နှစ်ဖက်ကိုဖိဖြဲကိုင်၍ လီးကို စောက်ခေါင်းထဲ ဗြိကနဲ ဗြွတ်ကနဲ အသံထွက်အောင် ခပ်ပြင်းပြင်းလိုးဆောင့်ချလိုက်ပြီး နှစ်ယောက်သား တက်ညီလက်ညီပင် ကာမပင်လယ်ပြင်ကျယ်ကို မမောနိုင်မပန်းနိုင် လက်ပစ်ကူးခတ်၍ နေကြလေတော့၏။မအုန်းမှာ တော်တော်ကလေးအလိုးအဆောင့်ခံနိုင်သူဖြစ်သည်။မြတ်ထွန်းဘယ်လောက်ဆောင့်လိုးလိုး တစ်ချက်ကလေးတောင် မညည်းမိအောင် ထိန်းထားနိုင်သည်။ မြတ်ထွန်းဆောင့်ချက်လည်း ဘာပြင်းသလဲ မမေးနှင့်။ ညတုန်းကသာ အညို့ကို ခုလိုပုံစံမျိုးလိုးမည်ဆိုလျှင် စောက်ပတ်ကွဲပြဲပြီး ဆေးရုံကို တစ်ခါတည်းပို့လိုက်ရုံသာ ရှိပေရော့မည်။
မြတ်ထွန်းမှာ အချက်နှစ်ဆယ်အစိတ်ဆောင့်ချလိုက်ရင်း သူမစောက်ပတ်ထိပ်မှ အစေ့နီတာရဲကလေးကို လက်မလက်ညှိုးနှင့် ညှပ်၍ ဖိကာဖိကာချေပေးလိုက်သည်။ သူမနှုတ်ခမ်းများကိုလည်း သူ့နှုတ်ခမ်းဖြင့်ဖိကပ်ကာ စုပ်နမ်းရင်း ခါးကိုနှိမ့်လိုက်ကြွလိုက်လုပ်၍ တစ်ချက်ချင်းမှန်မှန် ဆောင့်လိုးပေးနေလေရာ မအုန်းတစ်ယောက် အတော်ကလေးကောင်းသွားပြီး စောက်ရည်များ အဆက်မပြတ်ထွက်ကျလာခဲ့ရကာ တစ်ချီပြီးသွားသည်။
မြတ်ထွန်းကပုံစံပြောင်းပြီး သူမကိုလေးဘက်ကုန်းစေလိုက်ကာ သူမဖင်အနောက်မှနေ၍ ခွေးကုန်းလိုးဆောင့် ပေးပြန်သည်။
“ဖင်တော့ မလိုးနဲ့ နော် မောင်လေး “
“မလိုးပါဘူး စောက်ပတ်ကို ပဲ လိုးမှာပါ မမအုန်းရဲ့စောက်ပတ်ကို လိုးလို့မဝသေးဘူး “
ပြောပြီး မြတ်ထွန်းက သူ့လီးကို သူမစောက်ပတ်အဝလေးမှာ အသာတေ့ကာ လိုးဖို့ပြင်လိုက်သည်။
မအုန်းဖင်နှစ်ဖက်အကြားမှ ပြူးထွက်နေသောသူမ၏စောက်ပတ်မှာ အရည်များဖြင့်ရွှန်းလဲ့နေပြီး အနည်းငယ် ပြဲပြဲဟဟကလေးဖြစ်လျှက် မြတ်ထွန်းလီးကြီးထိုးဖောက်ဝင်သွားချိန်မှာ စောက်ခေါင်းလေးက ပိုမိုပြဲအာသွားပြီး စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများ အတွင်းသို့ လိုက်ပါရှုံ့ဝင်သွားကာ လီးကြီးပြန်လည် ဆွဲနှုတ် လိုက်ချိန်မှာမူ နှုတ်ခမ်းသားများအပြင်ကို ပြန်အံထွက်လာရလျှက် မြတ်ထွန်းလီးကြီးနှင့်တစ်ပါတည်း ကပ်ပါ၍ ကြွတက်လာကြသည်ကို တွေ့နေရသည်။ သူမစောက်ရည်များလည်း ပို၍ ရွှဲလာသည်။ မြတ်ထွန်းက တစ်ချက်ချင်းဆောင့်ချပေးနေရာမှ သူမဖင်စအိုဝကလေးကိုလည်း လက်သွင်းပြီး ထိုးနှိုက်ဆောင့်ပေး နေလိုက်သေးသည်။
“အ အား ကောင်း တယ်မောင်လေး လိုး… ကြမ်းကြမ်းလိုးပါ … မြန်မြန် လိုး … ဆောင့် ဆောင့် ပေးစမ်းပါ ဟင်း အင့် အင်း “
“ဇွတ် ဖွပ် ဘွတ် …ဘုတ်ဖတ် ဗွပ် … စွိဇွပ် ဗြွတ် ဗလပ် ပွပ် … ဘွပ် “
သူ့လီးကြီးတရစပ်ဖိဖိဆောင့်ချရင်း ဖင်ထဲကိုလည်း လက်အနှိုက်ခံလိုက်ရသဖြင့် မအုန်း ကာမဇောအပြတ်ကြွ လာရပြီး အမျိုးအမည် မဖော်ပြနိုင်သော ဝေဒနာတစ်ရပ်ကို ခံစားလိုက်ရသည်။
စောက်ပတ်နှင့်လီးမှာ အံကိုက်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်း မအုန်းအနေနှင် မချိအောင်ခံရသည်ဆိုသည်ကိုမူ ဘယ်လိုမှ မငြင်းနိုင်ပါချေ။မြတ်ထွန်းတစ်ချက်ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း သူမစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများမှာ တင်းကနဲ တင်းကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီး အကုန်စုတ်ပြတ်သွားပြီလားလို့တောင် တွေးမိလေသည်။
မြတ်ထွန်း နာရီဝက်ခန့်ကြာမြင့်သည်အထိ အဆက်မပြတ်လိုးရင်း သုက်ရည်ပန်းထွက်၍ တစ်ချီပြီးချိန်မှာ မအုန်းလည်း သူလိုးသမျှကို ဖင်ကုန်း၍အလိုးခံနေရာက နှစ်ချီသုံးချီမက စောက်ရည်များ မပြတ်ထွက်ကျကာ ကာမသုခကို အကြိမ်ကြိမ်အလီလီ ခံစားရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေသည်။
မအုန်းလည်း အပြန်နောက်ကျနေမည်ဆိုပြီး အဝတ်အစားများပြန်လည်ဝတ်ဆင်၍ အိမ်ဖက်ဆီသို့ လှည့်ပြန်သွားသည်။
မြတ်ထွန်း တစ်နေ့တာလုံး အနားယူပြီး ညရောက်တော့ အပြင်ထွက်ကာ အရက်နှင့်စားစရာများဝယ်ယူပြီး ပြန်လာခဲ့သည်။ တစ်ယောက်တည်း ရေချိန်ကိုက်အောင် သောက်ပြီးမှ အိမ်ကြီးအနီးရှိကားရုံနဘေးမှာ သွားရောက်စောင့်ဆိုင်းကာ အတန်ကြာတော့ အိမ်ကြီး၏အနောက်ပေါက်မှနေ၍ လူရိပ်တစ်ခု ထွက်ပေါ် လာသည်ကို မြင်လိုက်ရပြီး အနားသို့ လျှောက်သွားကာ …
“ရွှတ် မမ အုန်း “
ဆိုပြီး မအုန်းလည်း သူ့ကို တွေ့တော့ ရင်ခွင်ထဲသို့ အပြေးကလေးလှမ်းဝင်လာခဲ့ပြီး နှစ်ယောက်သားအပြန်အလှန် ပွေ့ဖက်နမ်းစုပ်နေလိုက်ကြရင်းက …
“မမ . အခန်းထဲ သွားရအောင် နော် “
သူမက ခေါင်းကို အသာညိတ်လိုက်သည်။နှစ်ယောက်သား မြတ်ထွန်းအခန်းဖက်ကို လျှောက်လာကြပြီး အိပ်ခန်းထဲရောက်သည်နှင့် မြတ်ထွန်းက တံခါးကို အသာပြန်စေ့ပိတ်လိုက်ကာ အိပ်ယာထက်ဆီ လှမ်းလာခဲ့ကြပါသည်။
“မင်း အရက်တွေ သောက်နေပြန်ပြီလား မောင်လေး “
“နည်းနည်းပါးပါးပါ မမ သောက်ချင်လို့ လား “
“အို မသောက်ချင်ပါဘူး ဒီလောက် ခါးက ခါးနဲ့ “
မြတ်ထွန်း သူမကိုဖက်၍ ကုတင်ပေါ် လှဲချလိုက်သည်။ သူတို့ နှစ်ယောက် လုံးထွေး သွားကြလျှက် …
“ဘာလဲ မောင်လေး “
“နေ့လည်ကလို မမ လိုးပေးဦးမလား “မအုန်း တဟင်းဟင်းနှင့် ရှက်စနိုးကလေးရယ်နေလိုက်ရင်း …
“ဟင်း ဟင်း မောင်လေးက အဲဒီလိုလုပ်ပေးတာ ကြိုက်လား “
“ကြိုက်တာပေါ့ မမဆောင့်တာ ခံလို့ကောင်းတယ် “
“လူပျင်း မမ လည်း ကိုယ်တိုင်လုပ်တာထက် မောင်လေးဆောင့်ပေးတာ ပိုကြိုက်တယ် တကယ်ပြောတာပါ နေ့ခင်းကတောင် သူလုပ်တာနဲ့ မမဖင်ကွဲပြီလို့ ထင်နေတာ ဟင်းဟင်း ဟင်း “
မြတ်ထွန်းက သူမကိုယ်လုံးအိအိကြီးကို ပွေ့ပိုက်ကာ မချင့်မရဲကလေးနမ်းစုပ်ပစ်လိုက်ရင်း
“မကွဲပါဘူး မမအုန်းရယ် မမလည်းယောက်ျားရပြီး သမီးတစ်ယောက်တောင်ရနေပြီပဲဥစ္စာ လီးကို ကြောက်နေရသေးလား ဟင်း ဟင်း “
“မကြောက်ပါဘူး မောင်လေး လီးက သူများထက် ပိုကြီးလို့ပြောတာပါ အပျိုစောက်ပတ်သာဆို သေချာပေါက် ကွဲမယ် သိလား “
“ကဲ မမ အချိန်မရှိဘူး လိုးရအောင်နော် “
မြတ်ထွန်း သူမခါးမှထမီကို လှန်တင်လိုက်ကာ စောက်ပတ်ကြီကို ကုန်းနမ်းလိုက်သည်။မအုန်း၏ စောက်ပတ်ကြီးမှာ မှိန်ပျပျမီးရောင်အောက်မှာ အရည်လဲ့ကာ အပေါက်ဝကလေး မဟတဟဖြစ်လျှက် လိုးချင့်စဖွယ်ကြီး ဖြစ်လို့နေတာကို သူတွေ့လိုက်ရသည်။
“ဖွေးဖွေး အိပ်ပြီလားမမ “
“အင်း သူအိပ်လို့ မမထွက်လာနိုင်တာပေါ့ နောက်ညတွေကျရင်လည်း သမီးအိပ်မှဖြစ်မှာနော် မောင်လေး လူတော့ မသိစေချင်ဘူး “
“စိတ်ချပါ မမအုန်း ကဲ စောက်ပတ်ကြီးက ဖောင်းကားပြီး ကြရွနေတာပဲ မမရယ် အသားကုန်မှုတ်ပစ်လိုက်ချင်ပြီ “
“အို အို မှုတ်ချင်မှုတ် ယက်ချင်ယက် သူသဘောရှိ လုပ်ပါကွယ် အ အာ အင့်အိ အိ ဟင်းဟင်း ဟင်း “
မအုန်းပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဖြဲလိုက်တာမို့ သူမထမီ တစ်ကွင်းလုံး ခါးအထက်ဆီလန်တက်သွားရပြီး မအုန်းလည်း ပက်လက်ကားရယားပုံစံအတိုင်းဖြစ်လို့နေကာ မြတ်ထွန်းလည်း စောက်ပတ်ဖောင်းဖောင်းကားကားကြီးကို မျက်နှာအပ်၍ လျှာနှင့်တပြတ်ပြတ်ယက်ရင်း စောက်စေ့ကိုနှူးလိုက် စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းကို လျှာနှင့် ယက်သပ်တင်လိုက် စောက်ခေါင်းထဲကို လျှာတစ်ခုလုံးသွင်း၍ လှည့်ပတ်မွှေနှောက်ပစ်လိုက်လုပ်ပြီး စုပ်ကာဆွကာ လျှာစွမ်းပြနေလေရာ မအုန်းတစ်ယောက် တစ်ကိုယ်လုံး ကော့ပျံ၍ ထွန့်လူးသွားခဲ့ရလေတော့၏။
“ဟင်းတော်ပြီ တော်တော့ မောင် လေးရယ် မမ စောက်ပတ် တော်တော် ရွနေပါပြီ လိုးကြပါစို့ နော် နော် “
“ကောင်းပါပြီ မမ “
မြတ်ထွန်း သူမကိုယ်လုံးကို နေရာကျအောင်ပြင်လိုက်ကာ သူ့ပုဆိုးချွတ်၍ အသင့် တောင်မတ်နေပြီ ဖြစ်သောသူ့လီးချောင်းကြီးကို မအုန်းစောက်ပတ်အကွဲကြောင်းအောက်ဖက်ရှိ စောက်ခေါင်းအပေါက်ကလေး ထဲသို့ ဗြွတ် ဇွတ် ကနဲ ထိုးဆောင့်ထည့်သွင်းပစ်လိုက်လ၏။
သူ့လီးဒစ်လုံးကားကားကြီးတိုးဝင်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်း လီးကိုယ်ထည်တုတ်ထွားထွားကြီးကလည်း ခေါင်းဝင်ကိုယ်ဆန့်သည့်အလား အနောက်မှနေ၍ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ပါတိုးဝင်သွားရလျှက် ကြပ်ကြပ်သိပ်သိပ် တစ်ကြပ်စီးပိုင်စွာဖြင့် ကာမရသကို အပြည့်အဝပေးနေလေသည်။
“အားဆောင့်ပါ မောင်လေး … မြတ်ထွန်းဆောင့် လီးကြီးက သိပ်အားရတာပဲ… မမအုန်း မင်းလီးဒီလောက် ကြီးတာ ခုမှသိရတယ် ကွယ် “
“စောစောက သိရင်ကော မမ ရဲ့ “
“ဟင်းဟင်း စောစောသိရင် စောစောအလိုးခံမှာပေါ့ ဟင့် ဟင့် သွား လူကို ဒါပဲ ပြောစေချင်တယ်မဟုတ်လား “
မအုန်းလက်သီးဆုပ်ကလေးနှစ်ခုက သူ့ရင်ဘတ်ဆီကို တဖုန်းဖုန်းကျရောက်သွားပြန်ပါသည်။
မြတ်ထွန်း သူမကို ပေါင်နှစ်ဖက်ထမ်း၍ လိုးပေးသည်။ မအုန်းဖင်နှစ်ဖက်က သူ ပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကိုပင့်မ လိုက်သည်နှင့် အပေါ်ကိုကြွတက်လာရပြီး လီးကြီးအရင်းထိ ဝင်နိုင်အောင် တံခါးအသင့်ဖွင့်ပေး လိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။ စွပ် ဖွပ် စွပ် ဖွပ် ဗွပ် အသံနှင့်အတူ မြတ်ထွန်း လီးအရင်းစိုက်ကာ ဇယ်ဆက်သလို ဆောင့်ထည့်ပေးလိုက်တော့ မအုန်း အသက်ရှူသံပြင်းလာပြီး သူ့လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်ကို လွတ်သွားမှာ စိုးသည့်အလား တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ ခါးကိုကော့ကော့ပေး လာရချေပြီ။
“ဆောင့် ဆောင့် အ အား မ မညှာနဲ့ မောင်လေး မမအုန်း ခံနိုင်တယ် အ ကျွတ် ကျွတ် ကောင်းလိုက်တာကွယ် ဆောင့်ဆောင့်ပေး ကြမ်းကြမ်း လုပ်ပါမောင်လေး အိအိ အင့် အင့် “
“ဗွပ် ဘုတ် ဘုတ် ဇွပ် စွတ် ဘွတ် ဗလပ် လပ် ဘုတ် ဖွပ် ဘုတ် ဘတ်ဗွပ် “
လီးဝင်သံက တဖြည်းဖြည်းနှင့်မြိုင်ဆိုင်လာသည်။ မအုန်းက အသားဖြူသူပီပီ စောက်ရည်များကရွှန်းလှပြီး သူမပေါင်ခြံအထိတိုင် ယိုစီးကျလာပြီဖြစ်ရာ လီးချောင်းအဝင်အထွက်ပိုသွက်ပြီး လိုးရတာလည်း သက်တောင့်သက်သာဖြစ်လျှက် လီးအဝင်ပိုနက်၍လာသည်။ မြတ်ထွန်အားပါပါဖိဆောင့်ချလေ လီးကတဆုံးအထိ ဝင်ဝင်သွားပြီး မအုန်းရင်ခေါင်းထဲမှာ နင့်ကနဲနင့်ကနဲဖြစ်ကာနေလေသည်။
အချက်လေးငါးဆယ်ဆောင့်လိုးအပြီးမှာ နှစ်ယောက်စလုံး ထန်လာကြသည်။
“ကောင်းလိုက်တာမမ ရယ် မမစောက်ပတ်ကြီးက ကျွန်တော်လိုးဖူးသမျှထဲမှာ အကောင်းဆုံးပါပဲ နူးအိပြီးစီးစီးပိုးပိုးသိပ်ရှိတာပဲ “
“မမ လည်း ဒီလိုပဲ မောင်လေး … လီးကြီးတိုင်းမကောင်းပေမယ့် ခုမောင်လေး ဟာကြီးက မမခံလို့တောင် မဝနိုင်ဘူး တကယ်ပြောတာ ဟင့် ဟင့် ဟင့် “
“မမ ပြီးချင် ပြီလား “
“အင်း အင်း လုပ် လုပ် မြန်မြန် “
“မမ အပေါ်ကတက်လိုးပေး မမလိုးတာနဲ့ ဒီတစ်ချီပြီး လိုက်ချင်လို့ ပါ “
“ရတယ် မောင်လေး “
ဆိုပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်ကနေ မအုန်းတက်ခွထိုင်လိုက်ရာက ဖင်ကြီးကိုတဗြုန်းဗြုန်းနှင့် လှိမ့်ပိတ်ဆောင့်၍ အချက်လေးဆယ် ငါးဆယ်လောက်ဆောင့်လိုးအပြီးမှာ သူ့လီးကသုက်ရည်တွေရော မအုန်းစောက်ပတ်မှ စောက်ရည်တွေပါ တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းပန်းထွက်လာကြပြီး နှစ်ယောက်သား ဆန့်ငင်ထွန့်လူး၍ ဖျစ်ကာညှစ်ကာ အပြိုင်အဆိုင်လိုးကြဆောင့်ကြရင်း ပထမတစ်ချီပြီးဆုံးခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့ရတော့၏။မအုန်းက အချိန်သိပ်မရှိဘူး မောင်လေးဆိုပြီး အနည်းငယ်ပျော့ကျသွားသည့် မြတ်ထွန်းလီးကို ပြန်တောင်လာအောင် သူမပါးစပ်နှင့် လိုက်လံပွတ်ဆွ၍ နမ်းစုပ်ပေးနေုပြန်ပါသည်။
မြတ်ထွန်းလီးလည်း သူမ အစုပ်အမှုတ်ကောင်းတာနှင့် တဖြည်းဖြည်း ပြန်တောင်လို့ လာသည်။ လဒစ်ထိပ်ခေါင်းကြီးက သူမတံတွေးများဖြင့် စိုလက်တင်းပြောင်နေပြီး သူမလက်ထဲမှာ တဆတ်ဆတ်နှင့် တုန်ခါနေတာကို တွေ့ရသည်။ မအုန်း သူ့လီးကိုကြည့်၍ တံတွေးကို အကြိမ်ကြိမ်မျိုချနေမိသည်။ စောက်ပတ်ထဲမှာလည်း အလိုးခံလိုစိတ်ကြောင့် ရိုးတိုးရွတဖြစ်လာရသလိုပင်။
မအုန်း ဒီတစ်ချီကျတော့ သူမကိုယ်တိုင် အပေါ်ကနေ မြင်းထိုင်ထိုင်၍ သူ့လီးဒစ်လုံကြီးကို သူမ၏စောက်ခေါင်းထဲ ထည့်သွင်းပြီး စိတ်လိုလက်ရပင် ဖင်ကြီးကို နှိမ့်ကာကြွကာ လိုးဆောင့်ပေး နေရှာပေသည်။
မြတ်ထွန်း အောက်ကနေပေမယ့် မသက်သာလှပါ။ မအုန်းကိုယ်လုံးကြီးက တအိအိတလှိမ့်လှိမ့် ဖိလိုက် ကြွလိုက် လိုးဆောင့်ပေးနေမှုက သူ၏ကာမဇောကို ပို၍တက်ကြွအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနေသလိုကြီး ဖြစ်နေတာမို့ အောက်ကနေ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် သူ့လီးကိုကော့ကော့တင်ကာ ပင့်မြှောက်ညှောင့်လိုးပေးလိုက်ရင်း မအုန်းနှင့်သူ တစ်လှည့်စီ ဘတစ်ပြန်ကျားတစ်ပြန် အလိုးပြိုင်နေသလို ဖြစ်ကာနေလေတော့၏။
မအုန်းအဖို့ သူ့လီးကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ထိုင်ချရင်း စောက်ခေါင်းတစ်လျှောက် ပြည့်ကြပ်လှသော မြတ်ထွန်းလီးကြီး၏ ထိတွေ့ပွတ်တိုက်မှုက သူမ၏ရင်ထဲမှာ ကာလအတန်ကြာလိုလားတောင့်တခဲ့သမျှ ရမက်ဆန္ဒတွေကို အတိုးရောအရင်းပါ ဖြည့်ဆီးပေးနေသလိုဖြစ်နေရကာ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မှုမှာ အတိုင်းထက် အလွန်ပင်ဟု ဆိုရပေတော့မည်။
မအုန်း၏ စောက်ရည်တွေက မပြတ်စီးကျလာသည်။
သူမအနေနှင့် လုံးဝရပ်နားခြင်းမရှိဘဲ မြတ်ထွန်းမပြီးမချင်း သူမက ဖင်ကြီးနှစ်ဖက်ကို မြောက်ကာကြွကာ အဆက်မပြတ်ဖိဆောင့်ချ၍ နောက်ဆုံး မြတ်ထွန်းဇိုးဇိုးဇပ်ဇပ်နှင့် သူ့လီးကိုအဆုံးထိတိုင်ကော့ကော့ထိုးရင်း တဗြစ်ဗြစ်နှင့် လရည်ပျစ်ပျစ်တွေပန်းထုတ်လာချိန်မှာ သူမလည်း ကသောကမျော တစ်ချီထပ်မံ၍ ပြီးလိုက်ရင်း စောက်ခေါင်းထဲမှစောက်ရည်များ အသည်းအသန် ထွက်လျှံကျလာရပြန်ပါသည်။
မြတ်ထွန်း ခဏနားပြီး အရက်ခွက်ဆီ လက်လှမ်းလိုက်သည်။
တစ်ခွက် ပြီး နောက်တစ်ခွက် …
မီးတောက်အရက်ပြင်းပြင်းက ချက်ချင်းကြီးအာနိသင်ပြလာသည်။ စောစောပိုင်းက ကုန်ခမ်းသွားသည့် အားအင်တွေက ပြန်လည်ပြည့်ဝလာရသလိုပင်။
အမြည်းအဖြစ်ဝယ်လာသည့် ကြက်အသည်းအမြစ်တစ်ဖတ်ကို ကောက်ဝါးရင်း နောက် အသည်းတစ်ဖတ်ကို မအုန်းပါးစပ်ထဲခွံ့ကာကျွေးလိုက်သည်။ မအုန်းကျေကျေနပ်နပ်ကလေးပြုံးကာ အသည်းဖတ်လေးကို ကိုက်ဝါး၍နေပါသည်။သူ့ရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်ကာ ခေါင်းကလေးမှီလိုက်ရင်း
“သိပ်မသောက်နဲ့ မောင်လေးရယ် တန်ဆေး လွန်ဘေး တဲ့ “
“ဒီလိုညမျိုးအတွက် သူကဆေးဖြစ်တာပေါ့ မမအုန်းရဲ့”
“အဲဒါက အားရှိလို့လား “
မအုန်းကသူ့ကို မျက်စကလေးချီ၍ မေးလိုက်တော့
“ဟင်း ဒါတော့မသိပါဘူး သောက်ပြီးလိုးရင် မိန်းမခိုက်တယ်ဆိုလို့ပါ ဟဲဟဲ “
“အို မမအဖို့ တော့ အရက်မလိုပါဘူး ပြီးတော့ မောင်လေးက ဒီအတိုင်းလိုးရင်တောင် တစ်ချီတစ်ချီ တစ်နာရီနီးနီးလောက်ကြာတဲ့ဥစ္စာ ခုလိုသာ သောက်ပြီးလိုးရင် မမတော့ အသက်ဘယ်နားထွက်ရမယ် ဆိုတာတောင် သိမှာမဟုတ်တော့ဘူး ဟင်းဟင်း “
သူမအပြောနှင့် ဟန်အမူအယာကလေးကြောင့် မြတ်ထွန်းရင်ထဲ လှိုင်းထလို့သွားပြီး မအုန်းခါးလေးကို စွေ့ကနဲပွေ့ဖက်ကာ တရကြမ်းပင် နမ်းစုပ်ပစ်လိုက်မိပါသည်။
သူမကိုအိပ်ယာပေါ်ဆွဲလှဲချလိုက်ပြီး နို့စို့လိုက် ကိုင်လိုက် စောက်ပတ်နှိုက်ဆွလိုက်နှင့် အတန်ကြာတော့ နှစ်ယောက်သား ရင်ခုန်သံမမှန်ဘဲဖြစ်လာခဲ့ကြပြီး မြတ်ထွန်းလည်း သူမကို အိပ်ယာပေါ်မှာ ပက်လက် အနေအထားအတိုင်း သူ့လီးကို မအုန်း၏ စောက်ပတ်ထဲထည့်သွင်း၍ အပေါ်စီးကနေ ဆောင့်ကာ ဆောင့်ကာဖြင့် နောက်တစ်ချီ အပီအပြင် ထပ်ဆွဲလိုက်သည်။
အရက်ပြင်းကြောင့်လားတော့မသိ။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာ တကယ်ပဲ တစ်နာရီလောက်ကြာအောင် သုက်မထွက်နိုင်ဘဲ ရှိကာ မြတ်ထွန်းလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်း၍ တရကြမ်းပင် ရှိသမျှအားကုန်ထုတ်ကာ လိုးဆောင့်ပစ်လိုက်ပြီး မအုန်းခမျာမှာလည်း တစ်ချီပြီးတစ်ချီဆက်တိုက် ပြီးနေရသဖြင့် စောက်ပတ်တွေ ပူထူကျိန်းစပ်၍ သွားရလေသည်။
မအုန်းကို ပြန်ခွင့်မပေးသေးဘဲ ဒီအတိုင်းသူ့လီးကို သူမစောက်ပတ်ထဲမှာ ထည့်စိမ်ပေးထားရင်း နှစ်ယောက်သား ကာမစိတ်ပြန်နိုးထကာ သူ့လိင်တန်တောင့်တင်းလာပြီး သူမစောက်ပတ်လည်း တရွရွပြန်ဖြစ်၍လာချိန်မှာ နောက်ထပ်တစ်ချီ ခွေးကုန်းလိုးဆောင့်လိုက်ကြပြန်ပါသည်။
မအုန်း စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး သူအလိုးကောင်းမှုကြောင့် ပြဲပြဲလန်၍ပင် နေချေပြီ။
မအုန်းလည်း ဒီတစ်နေ့ ဒီတစ်ညတည်းနှင့်ပင် သူမဘဝမှာ ကွက်လပ်ကြီးဖြစ်ကာ အရူအမူး လိုအပ်လျှက်ရှိသည့် လီးအရသာကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ဖူဖူလုံလုံကြီးပင် ရရှိလို့သွားရတော့သည်။ရက်သတ္တ တစ်ပတ်ခန့် ကြာမြင့်သွားသည်။
မြတ်ထွန်းနှင့်မအုန်း နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုပင် အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်နှင့် အတိုးချ အချစ်စခန်းဖွင့်ပြီး သူ့အိပ်ခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်ကမ္ဘာတည်ဆောက်လျှက်ရှိကြရာက အိမ်ကြီးရှင်မိသားစုတွေ ပြင်ဦးလွင်ကနေ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုယ်ရှိန်သတ်မိကြတော့သည်။
အိမ်ရှင်ဦးကောင်းဇံ၏ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေရယ် သူမ၏သားသမီးသုံးယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသမီး မို့မို့ရယ် အကြီးဆုံးသမီးမှမွေးသည့် သူမ၏မြေးမကလေးနှစ်ယောက်ရယ် အားလုံးပေါင်း လေးယောက်ဖြစ်ပြီး သမီးကြီးတင်မေရီနှင့်အလတ်မစန္ဒီချိုကတော့ သူတို့အိမ်ထောင်နှင့်သူတို့ ဥရောပတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ အခြေချနေထိုင်နေကြပြီဖြစ်သည်။
သမီးကြီးတင်မေရီမှာ အသက် ၂၅ နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး သူမမှာ ငါးနှစ်အရွယ်သားတစ်ယောက်နှင့် လေးနှစ်သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိကာ နှစ်ယောက်စလုံးကို မိခင်ဒေါ်ကြော့ကြော့မေလက်ထဲ အပ်နှံထားပြီး အရွယ်ရောက်မှသာ ခေါ်ယူမည်ဟု တိုင်ပင်ထားကြသည်။ အလတ်မကတော့အသက် ၂၃ နှစ်ဝန်းကျင်ခန့် အိမ်ထောင်ကျတာ တစ်နှစ်ခွဲလောက်သာ ရှိသေးတာမို့ သားသမီးမယူဖြစ်ကြသေးချေ။
ကွယ်လွန်သူဦးကောင်းဇံနှင့်ဒေါ်ကြော့ကြော့မေမှာ သွေးသားရင်းခြာသမီးမိန်းကလေးသုံးယောက်အပြင် ဦးကောင်းဇံ၏ညီဖြစ်သူမှမွေးသော တူတော်စပ်သည့် အောင်သိန်းဇံဆိုသူကိုလည်း သားအဖြစ် မွေးစားထားခဲ့သေးသည်။ သူက ကယားပြည်နယ်ရှိ သတ္တုမိုင်းတစ်ခုမှာ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေပြီး ဒေါ်ကြော့ကြော့မေတို့ မိသားစုဝင်ငွေကို အများဆုံး ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပေသည်။
သူမ၏အငယ်ဆုံးသမီးမို့မို့မှာ တက္ကသိုယ်တွင် ပညာသင်ကြားဆဲ အသက်အားဖြင့် ၁၈ နှစ်အရွယ်ခန့်သာ ရှိဦးမည်။ အိမ်ဖော်မလေး ဖွေးဖွေးနှင့်အသက်အရွယ်ချင်း အတူတူလောက်ပဲဖြစ်သည်။
သူတို့ လူစုံပြန်ရောက်လာကြ၍ မြတ်ထွန်းလည်း ကလေးတွေ ကျောင်းပို့ ကျောင်းကြိုနှင့် အငယ်မ မို့မို့ကိုရော ဒီနှစ်မှသူငယ်တန်းစတက်သည့် မြေးအကြီးကောင်ကစ်ကစ်ကိုရော အကြိုအပို့လုပ်ရင်း အလုပ်ကတော်ရုံနှင့် မအားလပ်နိုင်တော့ပေ။
ညဖက်လူခြေတိတ်ချိန်ကျမှသာ နှစ်ယောက်သားတွေ့ဆုံနိုင်ကြသည်။ ဒါတောင်မှ အရင်ကလိုညတိုင်း မဟုတ်တော့ဘဲ လူသူအလစ်ကိုစောင့်၍ နှစ်ရက်ခြား သုံးရက်ခြားမှတစ်ခါ ဆိုသလို သူ့အခန်းမှာ လာရောက်တွေ့ဆုံကာ အချစ်ပွဲနွှဲဖြစ်ကြသည်။
ဒီကြားထဲမှာ မြတ်ထွန်းက အပြောင်းအလဲလေးအဖြစ် သူတစ်ခါကပျော်ပါးဖို့ဆိုပြီး ခေါ်ယူခဲ့ဖူးသည့် ကောင်မလေး ( အညို )ကို တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သွားရောက် ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကာ အတူပျော်ပါးလိုက်ကြသေးသည်။အညိုမှာ သူ့ကိုအတော်ကလေးအရေးပေးပြီး သံယောဇဉ်လည်းတော်တော်ရှိပုံရပေသည်။
တစ်နေ့တော့ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေက မြတ်ထွန်းကို ပဲခူးသို့ ကိစ္စတစ်ခုနှင့်သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို၍ ကားအထုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီး မနက်၁၀ နာရီလောက်မှာ အိမ်ကနေ နှစ်ယောက်သားထွက်ခဲ့ကြသည်။
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေမှာ အသက်အားဖြင့် ၅၀ ဝန်းကျင်ခန့် ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အသားအရေဖြူဝင်းကာ အရပ်မြင့်မြင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်တောင့်တင်းဖွံ့ထွား၍ အချိုးအစားကျနပြေပြစ် လှပသူဖြစ်ကာ အသက်အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် အရွယ်တင်နုပျိုသည့်မိန်းမချောကြီးတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ စိတ်တော့ နည်းနည်းထက်ပုံရသည်။ တစ်အိမ်သားလုံး သူပြောသမျှကို နာခံကြရသည်။
မြတ်ထွန်းအပေါ်မှာတော့ သူကောင်းမွန်စွာပြောဆိုဆက်ဆံသည်။ အခြား သူစိမ်းယောက်ျားသားများနှင့် ရောနှောပတ်သက်မှု မရှိသော်လည်း မြတ်ထွန်းကိုမူ အိမ်သားချင်းဖြစ်၍ လားတော့မသိ။ တခြားသူနှင့် မတူအောင် မျက်နှာသာပေးသူဖြစ်သည်။
ကားပေါ်မှာ နှစ်ယောက်သား ထွေရာလေးပါးစကားပြော၍ မောင်းနှင်လာကြရင်း ရန်ကုန်ကအထွက်မှာ သူမ ညကတစ်ညလုံးဗွီဒီယိုကြည့်ပြီး အိပ်ရေးပျက်ထား၍ အိပ်ချင်သည်ဆိုကာ ကားရှေ့ခန်းထိုင်ခုံမှာ မြတ်ထွန်းဖက်ကို ကိုယ်ကို ခပ်လျှောလျှောကလေးထား၍ မျက်လုံးအသာမှိတ်ကာ အိပ်လျက်သား လိုက်ပါစီးနင်းလာခဲ့ပါသည်။
မြတ်ထွန်းလည်း ကားမောင်းရင်း သူမ ဖက်ကိုမသိမသာစောင်းငဲ့ကြည့်ကာဖြင့် ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ၏ လည်ဟိုက်အင်္ကျီအောက်မှ ရင်သားဆိုင် အသားထစ်ကြီးနှစ်မြွှာက မို့မောက်တင်းကြွနေကြပြီး မြတ်ထွန်းစိတ်ကို အထူးပင်ဆွဲဆောင်ညှို့ငင်လျှက်ရှိလေသည်။ ဂီယာတံကို ကိုင်ထားသော မြတ်ထွန်းလက်တစ်ဖက်ကလည်း သူမ၏ထမီပျော့အောက်မှ နွေးထွေးနူးညံ့လှသော ပေါင်သားအိအိတစ်ဖက်ကို အမှတ်မထင် လာရောက်ထိတွေ့မိလျှက် … ။
မြတ်ထွန်းစိတ်တွေလှုပ်ရှားလာသည်။ ဖောက်ပြန်လိုစိတ်များ တဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရသည်။ ဒီအချိန်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မောကျနေဟန်ဖြင့် ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ ကူရှင်ကိုမှီထိုင်နေရာက ဇက်ကလေးလိမ်ကာ သူ့ဖက်ကို စောင်းငိုက်ကျလာတာမို့ မြတ်ထွန်းက ကပျာကယာပင် သူမပုခုံးကလေးကို ဘယ်ဖက်လက်ဖြင့် အသာထိန်းကိုင်ကာပွေ့ဖက်၍ နေသားကျအောင် သူမကိုယ်ကိုပြင်ပေးလိုက်ရပါသည်။
အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေသည့် သူမမျက်လုံးကို မဖွင့်ချင်ဖွင့်ချင်နှင့် ဖွင့်ကြည့်ကာ
“မမ အိပ်ပျော်သွားတယ် ကိုထွန်း “
“မမကြော့ အိပ်ချင် ဆက်အိပ်လေ … ပဲခူး ရောက်ရင် ကျွန်တော်နှိုးမှာပေါ့ “
“အင်း အိပ်မယ် နော် … ကိုထွန်း “
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ ထိုင်နေရာက ကူရှင်မှာကွေးကွေးလေးလှဲအိပ်ချလိုက်ရင်း သူမ၏ ညာဖက်လက်က မြတ်ထွန်းပေါင်တစ်ဖက်ကို လာရောက်ထိကိုင်ထားလိုက်သည်။မြတ်ထွန်းစိတ်ထဲ တစ်မျိုးဖြစ်သွားသည်။
“ဒီပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးပြီး အိပ်ပါလား မမ “
ဘယ်လိုကဘယ်လိုပြောမိသွားသည်မသိ။ မြတ်ထွန်းသူ့ပေါင်တစ်ဖက်ပုတ်ပြီး ဒေါ်ကြော့ကြော့မေကို ပြောလိုက်တော့ သူမမျက်လုံးကလေး ဝေ့၍ ကြည့်လိုက်ပြီး …
“ကိုထွန်း မောင်းရခက်နေမှာပေါ့ “
“ရပါတယ် ဖြေးဖြေးမောင်းမှာ ပါ မမ ရဲ့ လာ “
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ သူ့ပေါင်ပေါ်ကိုမမီမကမ်းလေးခေါင်းအုံးအိပ်လိုက်ရာ သူမမျက်နှာကလေးက ပေါင်ခွကြားမှ မြတ်ထွန်းအင်္ဂါကြီးနှင့် မထိတထိကလေးဖြစ်သွားသည်။မြတ်ထွန်းလက်တစ်ဖက်ကလည်း သူမကိုယ်ပေါ်ကို ရောက်ရှိသွားပြီး ခါးကလေးကို ထိန်းကိုင်ပေးထားသလို ပွေ့ဖက်ထားသလိုပုံစံဖြင့် …
သူ့လက်က ရင်သားအိအိတစ်ဖက်ကို ကောင်းစွာ ထိတွေ့မိသွားသည်။ဒေါ်ကြော့ကြော့မေလည်း စောစောကလောက် ငိုက်မြည်းမနေတော့ဘဲ မှိန်းရုံသာမှိန်း၍နေပါသည်။
သူမအပြုအမူကြောင့် မြတ်ထွန်း မင်သက်မိသွားရသည်။
“အို မ မ “
“…… …… “
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ သူ့လီးကို ကိုင်လိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကိုင်ရုံသာမဟုတ် ဆုပ်ကာဆွဲကာ ဆွကစားနေပေသည်။သူ့ကိုမော့၍ကြည့်ကာဖြင့် သူမနှုတ်မှလည်း …
“မောင်လေး မင်း မိန်းမ မယူတော့ဘူးလား “
“အော် အင်း ဟင်း မ မ ကျွန် ကျွန်တော် …”
“ဘာလဲ ရှက်နေသလား ကိုထွန်း “
ဆိုပြီး သူမလက်က မြတ်ထွန်းလီးကို အလွတ်မပေးဘဲဆုပ်မြဲဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ဂွင်းတိုက်သလို ဆောင့်ကာဆောင့်ကာပေးလိုက်ရာ လီကြီးမှာ ရုတ်ချည်းတောင်မတ်လို့လာခဲ့သည်။
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ မြတ်ထွန်း၏ပုဆိုးကို ဖြေလျှော့ချွတ်ချလိုက်ရာက မြတ်ထွန်းပေါင်ကြားထဲကို သူမမျက်နှာအပ်ကာ မှောက်အိပ်ချလိုက်ပါသည်။
“မမ ကြော့ အ အား မယုံနိုင်စရာပဲ မမရယ် “
မြတ်ထွန်းပြောမည်ဆိုလည်း ပြောစရာ… မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလွန်းနေသည်။
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ၏ စိတ်ကို သူမမှလွဲ၍ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှလည်း ခန့်မှန်းနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါချေ။ လင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်ပြီးကတည်းက သူမ တစ်ပါးသောယောက်ျားများနှင့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှပင် မဖောက်ပြားမိအောင် တတ်နိုင်သလောက် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့သည်။
သူမက မဟာဆီ မဟာသွေးပဲပါလို့လားတော့မသိပါချေ။ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုလျှင်လည်း သူမကို ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက် ဘယ်အရာပင်ဖြစ်ပစေ တားဆီးလို့ မရနိုင်တာ အမှန်ပဲဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင်းအလိုအရ (Will Power) အားကြီးသူ ဟုဆိုရမည်လားတော့မသိချေ။
ယခုလည်း မြတ်ထွန်းကို အေးအေးလူလူ နှစ်ယောက်တည်းတွေ့နိုင်ဖို့ တမင်တကာသူမဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီကောင်လေးကို သူမ လိုချင်သည်။ လိုချင်သည်ဆိုတာကလည်း ကြင်ယာအပ်နှင်းဖို့ အရေးကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ လိင်မှုဆိုင်ရာသက်သက် ကာမလိုအင်ဖြည့်ဆီးဖို့ရန် အသုံးပြုလိုခြင်းသာဖြစ်သည်။
ပဲခူးသွားမည့်ကိစ္စက သိပ်ရေးကြီးခွင်ကျယ်တော့မဟုတ်ပေ။ သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှ အကြံပေးချက်အရ ယောက်ျားရှိစဉ်က ဝယ်ယူထားခဲ့သော မြေယာများအတွက် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ( လန ၂၉ ပုံစံ စသည်ဖြင့် ) အပြောင်းအလဲတချို့ပြုလုပ်ရန် ဋ္ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံ လာရောက်တွေ့ဆုံရခြင်းသာဖြစ်သည်။ သူမအနေနှင့် ဤကိစ္စကို ကိုယ်တိုင်မလာနိုင်လည်း ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်၍ စီစဉ်နိုင်သည်ဖြစ်ရာ အရေးတကြီးအခြေအနေမျိုးမဟုတ်မှန်းသိသာလှပေသည်။
ကားလေးက မြို့ပြင်ထွက်သည့် လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ ငြိမ်သက်စွာရပ်တန့်လျှက်ရှိသည်။ ကားလေးအတွင်းမှာတော့ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေတစ်ယောက် မြတ်ထွန်းပေါင်ကြားထဲ သူမမျက်နှာ အပ်ထားရာကနေ ခေါင်းမဖော်နိုင်သေးပေ။ အတန်ကြာမှ သူမလှဲအိပ်နေရာက ထလာပြီး …
“ကိုထွန်း မမကို တစ်မျိုးထင်နေပြီလား “
“မထင် ပါဘူး မမကြော့ ရယ် “
“မမ ခုလိုဖြစ်တာ တမင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် မမ မင်းကို စိတ်ဝင်စားမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ “
“ပြောပါ …မမ “
“မမအကြောင်းလဲမင်းအသိပဲလေ မမဟာ လင်သေမုဆိုးမတစ်ယောက် ပြီးတော့ သမီးသုံးယောက်အမေလည်း ဖြစ်တယ် မမကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လောက်ထိန်ထိန်းသိမ်းသိမ်းနေလာခဲ့တယ်ဆိုတာ မင်းမျက်မြင်ပဲလေ ဒါပေမယ့် လူဟာလူ မိန်းမဟာမိန်းမပါပဲ မမလည်းသူများတကာလို ကာမဂုဏ်ခံစားချင်တဲ့ သွေးနဲ့ကိုယ် သားနဲ့ကိုယ် အရွယ်ရှိသေးတဲ့မိန်းမသားတစ်ယောက်ပါ ဒီလောက်ပြောရင် မင်းနားလည်နိုင်မှာပါ မောင်လေး “
“မမကို ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ် မမဘာလိုချင်သလဲ ကျွန်တော် ဖြည့်ဆီးပေးမယ် ဒီအတွက် ဘာအခွင့်အရေး တစ်ခုမှ ကျွန်တော်မယူဘူးဆိုတာ မမကြော့ကို ရဲရဲကြီးကတိပေးပါတယ် မမ ယုံပါ “
“ဟင်းဟင်း မင်း …တကယ်ပြောတာနော် မောင်မြတ်ထွန်း “
“တကယ် ဘုရားစူးရစေ့ မမ ကြော့ ရယ် “
“ဒါဖြင့် မမ မင်းကို ယုံလိုက်တော့မယ် မောင်လေး “
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ ပြောရင်းက သူမကိုယ်ပေါ်က အင်္ကျီကို စတင်ချွတ်ပေးလိုက်လေသည်။ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ၏ဘရာအောက်မှ နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာအယ်အယ်ထွားထွားကြီးဖြစ်သည်။ သူမက ဘရာစီယာကြိုးကလေးကို လျှော့ချပေးလိုက်တော့ နို့ကြီးနှစ်လုံးက ဘရာအောက်ကနေ ခုန်ထွက်လာသည်။ မြတ်ထွန်း သူမနို့နှစ်လုံးကို လက်ဖြင့် စုံကိုင်၍ ဖျစ်နယ်လိုက်သည်။
သူ့ကိုယ်ကို နေရာရွှေ့လာပြီး နို့နှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီကုန်းစို့ပေးသည်။နို့အောက်ခြေကနေ စုံကိုင်၍ နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်ခုကို နာနာလေးစို့ပေးလိုက်တော့ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေကော့ပျံ၍သွားကာ မြတ်ထွန်းကိုယ်လုံးကြီးကိုသူမ၏ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သိမ်းကျုံးဖက်ထားလိုက်ရင်း …
ကားလေးထဲမှာ သူမ၏ တဟင်းဟင်း ရယ်မောသံကလေးများ ပျံ့လွင့်၍သွားရချေပြီ။
“မမ တွေ့ချင်ပြီ “
“ဟင့်အင်း ဟိုရောက်မှတွေ့ ခု လမ်းပေါ်မှာကြီးဖြစ်နေတာ “
“ဟိုရောက်ရင် တည်းခိုခန်းတစ်ခုခုဆီသာ တန်းမောင်းသွားလိုက် မောင်လေး ကြားလား “
“ကောင်းပါပြီ မမကြော့ “
မြတ်ထွန်းလက်များက သူမကိုစရံသတ်သည့်အနေနှင့် ပေါင်ကြားထဲကိုလက်ထည့်ကာ သူမ၏အဖုတ်ကို နှိုက်စမ်း နေသည်။ အဖုတ်ကလေးမှာဖုဖုဖောင်းဖောင်းဖြစ်လျှက် စိုစိစိကလေး အရည်များစိမ့်ယိုကျနေတာကို တွေ့ရသည်။
“ကဲပါ ကားကိုသာမြန်မြန်မောင်း မမ မင်းတွေ့ချင်တာ ပြပေးမယ် “
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ သူ့ကိုမချိုမချဉ်ကလေးကြည့်၍ မျက်လုံးတစ်ဖက်ကို အသာမှိတ်ကာ လျှာကလေးတစ်လစ် ထုတ်ပြလိုက်လေသည်။ ကားလေးက လမ်းမကြီးပေါ်ကိုတက်လာပြီး တရှိန်ထိုးကြီး မောင်းထွက်၍ လာခဲ့လေသည်။
“မောင်လေး ဒီမှာ “
ဆိုပြီး ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ သူမ၏ထမီကို အောက်နားကနေ အသာပင့်လှန်တင်လိုက်ရာက ထမီအောက်ကို လက်လျှိုပြီး အောက်ခံပင်တီကလေးကို ဖင်ကိုကြွ၍ ချွတ်ပစ်လိုက်ကာ ထမီကို သူမခါးအထက်ဆီလှန်တင်ပြ လိုက်လေသည်။ ပင်တီမရှိတော့တာမို့ အမွှေးအမြင် ကွေးကွေးနက်နက်အဖုတ်ကလေးအကြားမှ ဖောင်းကြွကာနေသော သူမ၏စောက်ပတ်မှာ အကာအကွယ်မဲ့စွာဖြင့် ဘွားကနဲထွက်ပြူလာခဲ့ရလျှက်။
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ သူမ၏စောက်ပတ်ကို လက်ဝါးဖြင့်အသာအုပ်၍ ပွတ်သီးပွတ်သပ် လုပ်ပြလာလေသည်။ အကွဲကြောင်းကလေးကို ဖွဖွရွရွကလေးပွတ်၍ မြတ်ထွန်းဖက်ကို မြင်သာအောင် အဖုတ်တစ်ခုလုံးကို ကိုင်ပြ ဖြဲပြလုပ်နေသည်။မြတ်ထွန်းလည်း သူ့လီးကြီးကို ပုဆိုးအောက်ကနေလှန်တင်လိုက်ကာ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ အရှေ့မှာ ခပ်တည်တည်ပင် လီးဂွင်းတိုက်ပြနေမိလေပြီ။
မြတ်ထွန်း ကားကို မနည်းကြိုးစားပြီး ဖြောင့်အောင်မောင်းခဲ့ရသည်။
စတီယာရင်ကို လက်တစ်ဖက်က ကိုင်ကာ လီးကို တစ်ဖက်ကဆောင့်ဆောင့်ပြကာဖြင့် ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ ကလည်း သူမစောက်ပတ်ကို လှန်ဖြဲပြနေရာမှ လက်တစ်ဖက်က မြတ်ထွန်းလီးကို လာရောက်ဆုပ်ကိုင်ကာ ဂွင်းရိုက်ပေးနေရင်း မြတ်ထွန်းလည်း တစ်ချက်တစ်ချက် အခွင့်အရေးရလျှင် ရသလို သူမစောက်ပတ်ကို နှိုက်ပွတ်ပေးနေလိုက်ကာ ပဲခူးမြို့သို့ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။
လိပ်ပြာကန်ဖက်က အသိအိမ်တစ်အိမ်ဝင်၍ စကားအနည်းငယ် ဝင်ရောက်ပြောဆိုပြီး ပြန်လှည့်လာမည်ဟု ဆိုကာ တည်းခိုခန်းတစ်ခုဆီကို ဦးတည်၍ မောင်းလာခဲ့လိုက်လေသည်။
“လိုး ချင်ပြီ … မမ ရယ် “
“အို ဟင်း ဟင်း …ဟင်း မင်း မင်းနော် “
“မမစောက်ဖုတ်ကို ခုနကလို လှန်ပြ … နေ… နေ ထမီ မချွတ်နဲ့ဦး …ထမီအောက်ကနေပဲ လှန်ပြ ကြည့်ချင်လို့ ဟင်းဟင်း “
“ရတယ် မင်းကြည့်ဖို့ပဲလေ ကဲ ဒီမှာ ဝအောင်သာကြည့် ဟင်း ဟင်း ဟင်း “
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ ကုတင်ပေါ်မှာခြေဆင်းထိုင်လိုက်ရာက စောစောတုန်းက ကားပေါ်မှာလုပ်သလိုပင် သူမထမီကို ခါးအထက်ဆီ ပင့်လှန်တင်ပြလိုက်ပါသည်။ စောက်ဖုတ်တစ်ကွင်းလုံး အတိုင်းသားပေါ်ပြီး ထူထပ်သောအမွှေးအမြင်အဖုတ်ကလေးကို မြတ်ထွန်းက သူ့လက်ဖြင့်သပ်၍တင်လိုက်ရာက သူမခြေရင်းမှာ ထိုင်ချလိုက်ရင်း စောက်ဖုတ်ကိုမျက်နှာအပ်ပြီး ပါးစပ်ဖြင့် လှမ်း၍ စုပ်နမ်းနေလိုက်ပါတော့သည်။
“အို မောင် မြတ် ထွန်းးး …… …… “
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ ဖီးလ် အရမ်းတက်သွားရသည်။
မြတ်ထွန်းခေါင်းကို သူမ၏ လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဖိကာဖိကာဖြင့် စောက်ပတ်ကိုကော့ကော့ပေးလိုက်ရင်း ကုတင်ကြီးပေါ်ကို နောက်ပြန်လဲပြိုကျသွားရလေသည်။
မြတ်ထွန်း သူမကို လုံးဝကို အနားမပေးတော့ပြီ။
သူ့အလုပ်ရှင်လည်းဖြစ် အသက်အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် အရွယ်တင်နုပျိုသည့် အလှပဂေးမမ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သည့် မမကြော့စောက်ပတ်ကို မရွံမရှာပင် လျှာဖြင့် တပြတ်ပြတ်ယက်၍ စောက်စေ့ကလေးကို စုပ်ကာစုပ်ကာ ဆွနှူးပေးနေသည်။
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ လုံးဝသည်းမခံနိုင်လောက်အောင် တဟီးဟီး ညည်း၍ အပြတ်ပင်ထွန့်လူးလာရတော့သည်။ မြတ်ထွန်းက သူ့လက်ချောင်းများနှင့်သူမစောက်ခေါင်းကလေးထဲကို နှိုက်ကာနှိုက်ကာ ဆောင့်ထိုးပေးလိုက်ရင်း အစိကလေးကိုလည်း မလွတ်စတမ်းခဲ၍ စုပ်ငုံပေးနေသည်။ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ အခေါင်းကလေးထဲမှစောက်ရည်များ မပြတ်ပင်စီးကျလာသည်။ စောက်ပတ်တဝိုက်ကို လျှာနှင့်ရစ်ဝိုက်ကာ အစိကိုလှုပ်ဆွလိုက် စောက်ခေါင်းထဲ လျှာတစ်ခုလုံး ထည့်သွင်း မွှေနှောက်လိုက်လုပ်ရင်း မြတ်ထွန်းလည်း သူမအရည်တွေ မဟားဒယားထွက်ကာ ပြီးဆုံးခြင်းသို့ ရောက်တော့မည့်အဖြစ်ကို ခန့်မှန်းလိုက်မိ၍ သူ့လီးကြီးကိုပြင်ကာ သူမစောက်ပတ်အဝမှာ လာရောက်တေ့ချိန် လိုက်လေသည်။
“မင်း လီးကြီးနဲ့ တအားဆောင့်မလိုးနဲ့နော် ကိုထွန်း “
“စိတ်ချ မမကောင်းအောင် လုပ်ပေးမှာပါ “
မြတ်ထွန်းပြောလိုက်ပြီး သူမစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လီးထိပ်နှင့် ထိုးထိုး၍ ကော်တင်လိုက် ထိုးနှစ်ဆွလိုက်လုပ်နေပါသည်။
“မမက အရည်တွေ အရမ်းသန်တာပဲနော် “
“အို မင်း လီးကြီး … ဒီလောက်ဆွနေတဲ့ဥစ္စာ ဟင်း …ဟင်း “
“ကျွန်တော်လိုးမယ်နော်မမ ကျွန်တော့်လီးလည်း ကားပေါ်မှာ မမစုပ်ထားတာနဲ့ တောင်ချင်တိုင်းတောင်နေပြီ လိုးချင်လှပြီ “
မြတ်ထွန်း တမင်တကာပင်ပြောလိုက်ရာ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေက …
“လိုးပါ အားရပါးရလိုး အိမ်ကျရင်သာ ဣနြေ္ဒမပျက်စေနဲ့ မောင်လေး ကြားလားမမ ပြောတာ “
“ဟုတ်ကဲ့မမ စိတ်ချပါဗျာ “
မြတ်ထွန်းပြောလိုက်ရင်း သူမပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကို ပြဲပြဲကားကားလုပ်စေလိုက်ရာက စောက်ပတ်အဝမှာ တေ့၍ထားသည့် သူ့လီးဒစ်ထိပ်ကြီးကို ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ၏ စောက်ပတ်အခေါင်းပေါက်ကလေးထဲသို့ စွတ် ဗြွတ် … ဆိုပြီး အားနှင့်ဖိဆောင့်လိုးချလိုက်လေသည်။
လီးက သူမစောက်ခေါင်းကလေးထဲကို တဝက်နီးနီးလောက် တစ်ကြပ်စွာ တိုးဝင်သွားသည်။
“အ အမေ့ … အင့် … အိ “
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ မျက်နှာကလေးရှုံ့မဲ့လို့သွားပြီး သူ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို သူမလက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တင်းတင်းကြီးလာရောက်ဆုပ်ကိုင်လာသည်။
“နာသွားလား မမ ကျွန်တော် ဖြေးဖြေးလိုးပေးမယ် “
“ရတယ် မောင်ထွန်း မင်းအဆင်ပြေသလို လိုးပါ မမကြိုက်တယ် မမစောက်ပတ်က လီးမဝင်တာကြာပြီဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ကြပ်နေမှာပေါ့ မောင်လေး “
“ပြီး …တော့ မင်း က … လီး တအားကြီးတယ် မင်းလီးကို မမခံကြည့်ချင်တယ် “
ဟုပြောလိုက်ရင်း မြတ်ထွန်းခါးကို တအားပင်ဖက်တွယ်ထားလိုက်ပါသည်။ မြတ်ထွန်းလည်း ကာမအဆိပ်က ငယ်ထိပ်ရောက်နေပြီဖြစ်၍ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ၏ ဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်းပင်ဆုပ်ကိုင်ဆွဲယူကာဖြင့် တဇွပ်ဇွပ် တဗွပ်ဗွပ် အသံမြည်အောင်ပဲ လေးငါးဆယ်ချက်မက ဖိဖိဆောင့်ချလိုက်တော့၏။
“အားးးး ကောင်း ကောင်းလိုက်တာ အထွန်းရယ် မောင် မောင်လေး လိုး လိုးစမ်း ကြမ်းကြမ်းလိုးစမ်းပါ မမကြော့စောက်ပတ်ကွဲရင် ကွဲ ပစေ မညှာနဲ့ သိလား အိ အိ အင့် အင့် ဟင့် “
“စွတ်ဖွတ်ဗွပ် ဘုတ်ဖတ် ဘုတ်ဘုတ် စွပ် ဖွပ် ဘုတ် စွိဇွပ် ဖွပ် ဗွပ် “
“အ အ ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေး မင်းလီးကြီး ပြည့်ကြပ်နေတာပဲ နော် လိုးစမ်း လီးအရင်းထိ တဆုံးထည့်ပြီး လိုးပစ်လိုက်စမ်း ဟင်းဟင်း “
မမကြော့ အပြတ်ထန်နေပြီ။ ဏှာအပြတ်ထနေပြီ လို့ ဗေဒင်ပင်မေးစရာမလိုဘဲ ပြောနိုင်သည်။
“မမကြော့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ထမ်းပြီး လိုးပေးမယ် ဒါမှ လီးအဝင်နက်ပြီး ဖီလင်အပြည့်ရမှာ မမရဲ့”
“လုပ် လုပ်လေ မင်းအကြိုက် လိုးချင်သလောက်လိုး လို့ ပြောထားသားနဲ့ မောင်လေး ဆောင့်ဆောင့် မနားလိုက်နဲ့တော့ မမ ပြီးချင်လာပြီ “
မမကြော့ လောဆော်မှုကြောင့် မြတ်ထွန်းလည်း အချက်လေးဆယ်ငါးဆယ်လောက်အထိ လီးတဆုံးဖိဖိဆောင့်ချလိုက်ရပြီး သူ့ဆောင့်ချက်အတိုင်းဒေါ်ကြော့ကြော့မေလည်း ခါးလေးကို ကော့ကော့ထိုးကာ စောက်ပတ်ကို မြောက်ကြွခံဆောင်ရင်း သူမစောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရည်များ အဆက်မပြတ်ပန်းညှစ်ထုတ်လိုက်လျှက် တစ်ချီပြီးမြောက်ကာ ပန်းတိုင်ရောက်ရှိသွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။
မြတ်ထွန်းလည်းပြီးလုပြီးခင် ဖြစ်လာ၍ နောက်ထပ်အချက်နှစ်ဆယ် လောက် အားသွန်လိုးဆောင့်ရင်း လရည်တွေကို သူမစောက်ခေါင်းထဲ ပန်းလွှတ်ထည့်လိုက်ရသည်။
“မမ အဆင်ပြေလား ဟင် “
“အတိုင်းထက် အလွန်ပဲ အထွန်းရယ် မမကို မင်းလက်နဲ့ တင်းတင်းဖက်ထားစမ်းပါကွယ် မမ ဒီလို မခံစားရတာကြာပြီ မောင်လေး “
“အော် မမရယ် ချစ်လိုက်တာ မမရယ် “
“ဘာရယ် အထွန်း “
“ချစ် ချစ် လိုက်တာ လို့ …”
“အဟွန်း …ဟွန်း ဟင်း … ဟင်း… ဟင်း “
မမကြော့ ကိုယ်လေးတသိမ့်သိမ့်တုန်အောင်ပင် အသံလွင်လွင်ကလေးရယ်မောလိုက်ရင်း မြတ်ထွန်းခါးကို တအားဖက်၍ သူ့နှုတ်ခမ်းထူအမ်းအမ်းကြီးနှစ်ချပ်ကို သူမနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးတွဲတွဲကလေးနှစ်လွှာဖြင့် ဖိကပ်နမ်းစုပ်ပစ်လိုက်ရာက …
“ချစ် ချစ် ပါသတဲ့ ရှင် ဒီက ဟော … ဒီ ကိုယ်နဲ့ ရင်းပြီးတော့ ကို ချစ်ရပါသတဲ့ …ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဒါ ပဲနော် ကိုထွန်း “
“ဘာ ဘာလဲ ဟင် …မ မ ??? “
“ကိုထွန်း နောက်ကို အိမ်မှာ ဖာမခေါ်ချရဘူး ဒေါ်အုန်းနဲ့လည်း ချိန်းပြီးမလိုးရတော့ ဘူး မမကြော့ တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်ရမယ် ဟုတ်ပြီလား “
“ဟင် ဒါ . ဒါ က မမ ဘယ် …ဘယ် လို သိ … “
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ တဟင်းဟင်း ရယ်လိုက်သည်။”မမက ဒီအိမ်မှာ အကြီးဆုံး တာဝန်အရှိဆုံးလူပဲ ဒီအိမ်မှာဖြစ်ပျက်တာ အကုန်သိရမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား ဟင်း ဟင်းဟင်း “
“မင်းက မအုန်းပြောတယ်ထင်လို့လား ဒီလိုပဲပေါ့ မမဖာသာသိတယ်လို့သာ သဘောထားလိုက် မင်း မအုန်းကို တော်တော်ဆော်လိုက်သေးတယ်ဆို “
“အာ ဒီလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး မမကလဲ “
“သေချာလို့လား … ပေါင်တွေတောင်ကွတယ်လို့ကြားတယ် အဟင်းဟင်း “
မမကြော့က သူမစကားကို သူမဖာသာသဘောကျသလို ရယ်နေလိုက်ပြီး …
“ကဲ ထားလိုက်ပါကွာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် မင်းလီးပြစမ်းပါဦး အထွန်းရဲ့ မတောင်သေးဘူးလားလို့ ဟင်း ဟင်း”
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေက မြတ်ထွန်းလီးကို အသာကိုင်စမ်းရင်း ဟိုဆုပ်ဒီနယ်ပြု၍ မြတ်ထွန်းလည်း သူမနို့ကိုကုန်း၍ စို့ကာဖြင့် ပေါင်ကြားထဲသို့ လက်နှိုက်ကာ ဆွ၍ဆွ၍ ပေးနေလိုက်လေသည်။
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေက သူ့လီးဒစ်လုံးကို စုပ်ကာငုံကာ လျှာနှင့်ယက်ဆွနေရင်း လီးတစ်ချောင်းလုံးကို ပါးစပ်ထဲသွင်း၍ ထည့်ဆောင့်ပေးနေသည်။ လီးကိုကုန်းစုပ် ပေးနေသော သူမ၏ဖင်သားအိအိကြီးနှစ်ဖက် အကြားရှိ စောက်ပတ်ကို မြတ်ထွန်းက လက်နှင့် ထိုးမွှေကာ နှိုက်ဆောင့်ပေးသည်။ စောက်ပတ်တဝိုက်ကိုလည်း ပါးစပ်နှင့်နမ်းစုပ်၍ လျှာနှင့်တပြတ်ပြတ်ယက်ကာ ပေးလိုက်ရာ မမကြော့ ဖင်ကြီးပိုကြွ၍ ကုန်းတက်လာခဲ့သည်။
စောက်ပတ်ကိုရော ဖင်စအိုဝကလေးကိုပါ တစ်လှည့်စီလက်နှင့်ထိုးဆွ လျှာနှင့်ယက်သပ်၍ တပြွတ်ပြွတ်နှင့် နေအောင် နမ်းလိုက်စုပ်လိုက် ယက်လိုက်လုပ်ပေးလိုက်တာမို့ မမကြော့ ကာမအကြောတွေ တဖျင်းဖျင်း နိုးကြားထကြွလာရပြီး ကုန်းရမလို ကွရမလိုဖြစ်ကာ မခံချိမခံသာထွန့်လူးကော့ပျံ လာခဲ့ရချေပြီ။
မမကြော့နှင့်သူ နောက်တစ်ချီထပ်မံ စခန်းသွားကြသည်။
ဒီတစ်ချီမှာမြတ်ထွန်းက အပြတ်ကို နှိုးဆွပေးထားပြီးဖြစ်၍ မမကြော့စောက်ပတ်မှာ စောက်ရည်များဖြင့် နူးအိကာနေပြီး စောစောတုန်းကထက် လီးအဝင်ပိုကောင်းလာသည်။ ပက်လက်လှေကြီးထိုးပုံစံအတိုင်း သူမပေါင်နှစ်ဖက်ကို ထမ်း၍လိုးသည်။ သူမစောက်ခေါင်းကလေးထဲမှာ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကကြပ်စီးကာနေပြီး တစ်ချက်တစ်ချက် အားပါပါဆောင့်ချလိုက်တိုင်း စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ ဟဟပြဲပြဲဖြစ်လျှက် လီးကြီးကျွံဝင်သွားတာကြည့်ပြီး မမကြော့ရောမြတ်ထွန်းပါ ရာဂမီးတွေပိုလို့တောက်လောင်ဆူပွက် လာခဲ့ရသည်။
မြတ်ထွန်းလည်း ဇယ်ဆက်သည့်နှယ် မညှာစတမ်း ဆောင့်လိုးချရင်း လီးဝင်လီးထွက်သံတွေက တဇွပ်ဇွပ် တဗွပ်ဗွပ်နှင့် လီးကတဖြည်းဖြည်း အဆုံးအထိဆောင့်ဝင်သွားပြီး မမကြော့နှုတ်မှညည်းညူသံများကလည်း တစ်စထက်တစ်စ ပိုမိုကျယ်လောင်၍လာပေသည်။
လုံးပတ်တုတ်သလောက် အလျားရှည်သောလီးဖြစ်၍ သူမရင်ခေါင်းထဲအထိ နင့်ကနဲနင့်ကနဲ သိပ်သည်းစွာ တိုးဝင်သွားပြီး တဒုတ်ဒုတ်နှင့် သားအိမ်ခိုက်အောင်ပင် ထိထိမိမိ ရှိနေပေသည်။ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ တစ်ယောက် မြတ်ထွန်းလိုးဆောင့်ချက်အတိုင်းလိုက်ပါ၍ ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ထိုးပေးနေရင်းက စိတ်မထိန်းနိုင်အောင်ဖြစ်လာပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နှင့် အကြောဆွဲသလိုဖြစ်ကာ စောက်ရည်များပန်းထွက်၍ တစ်ချှီ ထပ်မံပြီးသွားသည်။
မြတ်ထွန်းက သူ့လိုးဆောင့်မှုကိုမရပ်ဘဲ အချက်လေးငါးဆယ် ဆက်လက်လိုးဆောင့်ပေးနေပြီး ဒေါ်ကြော့ကြော့မေလည်း စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး ပူထူပြီး ကျိန်းလာခဲ့ရတာကြောင့် …
“မောင်လေး ခဏနေဦး “
“မမ နည်းနည်းညောင်းလာလို့ အနောက်ကနေပဲ လိုးပေးကွယ် “
ဟု ပြောလိုက်ရင်း သူမကိုယ်လေးကို အနောက်ဖက်လှည့်၍ ဖင်ကိုကျကျနနပင် ကုန်းပေးလိုက်သည်။ မြတ်ထွန်းလည်း သူမအလိုကျ ဖင်ကုန်းလိုးပေးသည်။
ခွေးကုန်းလိုးဆောင့်မှုကို သူမအနေနှင့် လိုလိုလားလားရှိတာတွေ့ရ၍ မြတ်ထွန်း ဒေါ်ကြော့ကြော့မေကို ကြိတ်ပြီး သဘောကျမိသွားသည်။ သူ့စိတ်ကြိုက်ပုံစံလည်းဖြစ်ပေရာ မြတ်ထွန်း သူမဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကိုဖျစ်ဆွဲ၍ စောက်ခေါင်းထဲသို့ သူ့လီးကြီး တဗြွတ်ဗြွတ်ထည့်သွင်းပြီး အားကြိုးမာန်တက်လိုးဆောင့်ရင်း အချက်သုံးလေးဆယ်ခန့်လိုးပြီးချိန်မှာ သူလည်း မဟန်နိုင်တော့ဘဲ လရည်တွေကို သူမ၏ စောက်ပတ် လိုဏ်ခေါင်းလေးအတွင်းသို့ တဗြစ်ဗြစ်နှင့် သွန်၍ ပန်းထည့်လိုက်ရလေသည်။
“မမ ကြိုက်လား ကောင်းရဲ့လားဟင် “
“ဘယ့်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲ မောင်လေးရယ် ကောင်းလွန်းလို့ မမအိပ်ယာကနေ မထချင်အောင်ကို ဖြစ်နေပြီ “
“မင်းလီးကြီးကလဲ တကယ်ကြီးသလောက် တအားလိုးနိုင်တဲ့လီးကြီးပဲ မမအသက်ရှူတောင်မဖြောင့်ဘူး သိရဲ့လား …ဟင်း “
“မမစိတ်တိုင်းကျလိုးပေးတာပါ … မမရဲ့ဟင်း ဟင်း “
“တစ်နေ့လုံး လိုးရအောင်ကွာ ညနေမှ အလုပ်ကိစ္စ သွားပြောကြတာပေါ့ “
မမကြော့ အလိုကျ တည်းခိုခန်းမှာ နောက်ထပ်နှစ်ချီထပ်ဆွဲလိုက်ကြသည်။
ညနေစောင်းလောက်မှာ သူမအသိအိမ်သွားရောက်ပြီး မြေယာနှင့်ပတ်သက်၍လိုအပ်သည်များကို ပြောဆိုတိုင်ပင်ကြပြီး မနက်ဖြန်ရုံးချိန်အတွင်း ကိစ္စအပြီးဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီမှုယူကာ တည်းခိုဆောင်သို့ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။
“ဒီတစ်ညတော့ အချိန်ရသေးတယ် မောင်လေး … မနက်ဖြန်ညနေကျမှ တို့ဒီကနေပြန်ကြတာပေါ့ “
သူ့ကိုပြောပြီး ခပ်စူးစူးကလေးစိုက်ကြည့်လိုက်သည့် ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ၏အကြည့်တွေထဲမှာ တစ်စုံတစ်ရာသောအဓိပ္ပါယ်တွေ ပါဝင်နေကြောင်းကို မြတ်ထွန်းတစ်ယောက်မှလွဲ၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ သိနိုင်လိမ့်မည်မထင်ပါချေ။